जसपाका दुवै पक्ष आज निर्वाचन आयोग जाँदै, के होला त मेलमिलाप ?
२२ असार २०७८, मंगलवार ०९:३२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका दुवै पक्षलाई आन्तरिक मेलमिलापका लागि आज बोलाएको छ । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन ४३ र ४४ बमोजिम पार्टीको आधिकारिकतामा दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।
यादव पक्षको निवेदनपछि आयोगले महन्थ ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन भनेको थियो । महन्थ पक्षले जवाफ दिएपछि आयोगले दुवै पक्षलाई मेलमिलापका लागि बोलाएको हो ।
कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले भिडभाड हुने भन्दै ७–७ जनालाई मात्र उपस्थित हुन भनिएको आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए । आजको छलफलमा आयोगका प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, आयोगका केही कर्मचारी, दुवै पक्षका नेताहरु र कानुन व्यवसायी रहनेछन् ।
दुई पक्षबीच आपसी समझादरी कायम भए सोही अनुसार निर्णय हुनेछ । सहमति नभए इजलास गठन प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने छन् । मेलमिलापका लागि बोलाए पनि स्रोतका अनुसार उनीहरुबीच यो सम्भावना छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पक्ष–विपक्षमा विभाजित भएको जसपाको उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा उत्रिएको थियो । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह पक्षमा थियो । ठाकुर र महतो ओली नेतृत्त्वको सरकारमा सहभागी पनि भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई सरकार पुनरगठन तथा विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै फैसला गरेपछि थपिएका मन्त्रीहरु स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।
आज एउटै मञ्‍चबाट सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड, नेपाल, वैद्य र चन्‍द, ओलीले पाएनन् निम्‍तो
काठमाडौँ । आज कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूले एउटै मञ्‍चबाट सम्बोधन गर्दैछन् । पुष्‍पलाल मित्रता केन्द्रको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा नेकपा माओवादी…
अमरेश कुमार सिंहलाई कारबाही गर्न, सर्लाहीका १२ नेताहरुको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संघीय संसद सदस्य अमरेश कुमार सिंहलाई कारबाहीको माग गरिएको छ । गृह जिल्लाकै जनप्रतिनिधि…
गण्डकीमा माओवादीले टुंग्यायो तीन मन्त्रीको नाम, शुक्रबार शपथ
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएको छ । बिहीबार माओवादीले गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीको नाम टुंगो…
८ श्रावण २०७८, शुक्रबार १०:०७
८ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०९:५४
विश्व खेलकुदको कुम्भमेला ओलम्पिकको उद्घाटन आज
८ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०९:५०
८ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०८:५७
७ श्रावण २०७८, बिहीबार २२:३२